EMISSION : Dr FEZINY Séraphine , Ireo tombontsoa azo avy amin’ny fihinanana spiruline. | Canalnews Madagascar
Home EMISSION EMISSION : Dr FEZINY Séraphine , Ireo tombontsoa azo avy amin’ny fihinanana spiruline.
EMISSION : Dr FEZINY Séraphine , Ireo tombontsoa azo avy amin’ny fihinanana spiruline.
By Nirinafév 09, 2015, 19:03 0
Tsy ampy ny fitsaboana amin’ny fampiasana fanafody fotsiny, hoy Dr FEZINY Séraphine raha ny toetr’andro ankehitriny. Noho ny faharatsian’ny vatan’ny olombelona dia tsy mandray firy intsony ny fanafody omena azy isika. Vokatry ny fikarohana nataony no nahitana fa ny spiruline no ampy hamerina amin’ny laoniny ny fahalavorarian’ny fanafody ampiasaina. 9 Taona izao no nahitany vahaolana tamin’ny alalan’io, ary maro ireo olona efa nahazo tombontsoa tamin’izany. Harena ananany, rehefa marary ilay olona ka mihinana azy, dia miha-mitombo ny heriny ary miha-salama izy, mandavorary ny fanafody hohanina ary manafaingana ny fahasalamana, ny fahasimban’ny voa sy ny aty ary ny poizina any anaty taova any, dia miha-miverina amin’ny asany ara-dalàna. Miha-tsara ny hery fiarovana ao amin’ilay olona, afaka mahatohitra aretina maro. Feno otrik’aina ao anatin’ny spiruline ka mamerina ireo singa ilain’ny vatana. Voaporofon’ny mpikaroka fa afaka manasitrana aretina toy ireny aretina tsy azo heverina ho sitrana intsony izy. Eny amin’ny Centre Marie Stella Analamahitsy alohan’ny tobin-tsolika TOTAL Analamahitsy no ahitana ny spiruline.
INTERVIEW: Dr FEZINY Séraphine
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/DR-FEZINY-11.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/DR-FEZINY-11.jpg »] DR FEZINY [/image_slider]
TAGcanalnews DR FEZINY SPIRULINE
Previous PostCENTRE MEDICAL MARIE STELLA: Efa nahazo alalana tamin’ny fanjakana, nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly. Next PostEMERGENCE MADAGASCAR : Ela vao misy fiantraikany ny PND, vonona hifanome tanana izy ireo raha misy ny ilàna azy.
EMISSION Dr FEZINY Séraphine: Ny gripa sy ny sery sy ny asan’ny spiruline amin’ny fiarovana izany.
SPIRULINE: Ambony ny tahan’ny vitamine C ao aminy, mahatohitra ny gripa.
TELETHON : Nanolotra izay voa-tsirambin’ ny tanana ny fikambanana HAFARI Malagasy